ဟင်းခတ်မွှေးကြိုင် အခေါ်အဝေါ်များ | Wutyee Food House
သိသင့်မယ် ထင်တဲ့ ဟင်းချက်ရာတွင် ပါဝင်ပစ္စည်းများ နှင့် အမွှေးအကြိုင်များဧ။် မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် အခေါ်အဝေါ်အများစုကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျန်တာတွေလည်း ဖြည့်စွက်ပေးကြပါနော်…း)
on April 26, 2010 at 10:42 am | Reply hmone
cool …thx for information…i really need it 😉
on April 26, 2010 at 10:45 am | Reply chowutyee
ကိုယ် ဈေးဝယ်ရင် အဆင်ပြေသွားတာပေါ့.. 🙂
on April 28, 2010 at 3:10 pm | Reply Ei
ယမ်းစိမ်းရဲ့ အမှန်က saltpeter/ saltpetre ပါ။ L တစ်လုံးပိုနေတယ်။ အခေါ်အဝေါ်တွေ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
on April 28, 2010 at 3:16 pm | Reply Ei
နောက် ကလဝေးရွက် ဝယ်ချင်ရင် Bay Leaf ဆိုပြီး အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ဝယ်ရင် ကလဝေးနဲ့မတူတဲ့ အရွက်သေးပြီး အနံပြင်းတဲ့ အရွက်တမျိုးပါ။ ဟင်းထဲမှာ ချက်ရင် ကလဝေးလို အနံ မသင်းပါဘူး။ Indian Bay Leaf ဆိုပြီးတော့ Indian ဆိုင်တွေမှာ မေးဝယ်မှ အမှန်ရပါတယ်။
on April 29, 2010 at 8:16 am chowutyee
Thanks for info!! 🙂
on August 11, 2011 at 7:53 pm Angeline Jensen
In Denmark, we use Bay leaf for Pork roast, in Danish we call Flaeskesteg, you must pronounce flaeskerstile. AJ
on August 16, 2010 at 9:39 pm | Reply zinmi
နံနံပင်ကို US မှာ Cilantro လို့ခေါ်ကြပါတယ်။
on August 17, 2010 at 5:06 am | Reply chowutyee
on August 30, 2010 at 7:37 pm | Reply Mein Mein
on August 31, 2010 at 4:12 am | Reply chowutyee
Mein Mein is very welcome!! 🙂
on November 8, 2010 at 9:37 am | Reply အေးအေးနွယ်
on November 12, 2010 at 5:15 am | Reply chowutyee
အေးနွယ်ရေ ၀တ်ရည်က ကိုးရီးယား ငရုတ်သီးနှစ်ကို ၀ယ်မသုံးဘူး၊ ကိုယ်တိုင် အိမ်မှာ လုပ်ပြီ သုံးတာ။ ဈေးသက်သာလို့ပါ။ ကိုရီယား ငရုတ်သီးနှစ်ဘူးလို့ ပြောဝယ်ရင် supermarket တွေမှာ ရှိပါတယ်….
on November 28, 2010 at 4:39 pm | Reply Sithu ag
Hey!! ltnc high school friend. any idea for “ngar hta min nel”. I got tuna inacan and chopped tomato. what do i need more? remember i am in uk. i might not be able to find all cooking stuff.
on December 21, 2010 at 3:56 am | Reply chowutyee
ဆော်ရီး သူငယ်ချင်းရေ…. ခုmesg တွေကို တွေ့လို့ reply ပြန်ဖို့ နောက်ကျသွားတယ်… ငါးထမင်းချဉ်လုပ်စားချင်ရင်
– ငါးခူးကို ဆားလေးနဲ့ အရင်ပြုတ်ပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးကို ဆီသပ်ပေးထားပေးထားပါ။
-ပြီးလျှင် အားလူးကို ပြုတ်ထားပေးပါ။
– ကြက်သွန်မြိတ်ကိုလည်း ပါးပါးလှီးထားပေးပါ
– ခုဆို ငါးထမင်းချဉ် စသုပ်လို့ရပါပြီ။ ထမင်း၊ အားလူး၊ ငါးခရမ်းချဉ်သီး အနှစ် အားလုံးကို ရောနယ်ပြီ အရသာ အပေါ့အငံ့အတွက် ဆား၊ ကြက်သားမှုန့် ထည့်နုယ်လိုက်ပါ။
– ပြီလျှင် အပေါ်မှ ကြက်သွန်ဖြူ ဆီချက်၊ ကြက်သွန်မြိတ်ကို ဖြူးပေးပါ။ -တွဲဖက်စားရမှာတွေကတော့ ဂျူးမြစ်၊ ၀က်ခေါက်ကြော်၊ ငရုတ်သီးခြောက်(အရှည်)၊
on December 18, 2010 at 9:58 am | Reply မြင့်မြတ်
on December 21, 2010 at 3:07 am | Reply chowutyee
သိချင်တာရှိရင်လည်း မေးနိုင်ပါတယ်နော်…. ၀တ်ရည်လည်း ဟင်းချက်ခါစက ဟင်းချက်ပစ္စည်းတွေ တွေ့တာနဲ့ ၀ယ်ရင်းဝယ်ရင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ များလာတာပဲ။ 🙂
on December 21, 2010 at 11:22 pm | Reply eskimo
ဆီသတ်ရွက်နဲ့ ဟင်းခတ်သစ်ရွက်(ပျဉ်းတော်သိမ်ရွက်)နဲ့ တူပါသလား။ မတူရင် ဆီသတ်ရွက်နဲ့ ရှမ်းနံနံ ကိုလည်း english လိုပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်။ thanks…
on December 29, 2010 at 4:00 am | Reply chowutyee
ဆီသတ်ရွက်ဆိုတာ ပျဉ်းတော်သိမ်းရွက်နဲ့ တူတူပါပဲ… ရှမ်းနံနံကိုတော့ Saw Herb Leave လို့ အင်္ဂလိပ်လို ခေါ်ပါတယ်.. 😀
on April 12, 2011 at 6:45 pm | Reply Cherry
အစ်မတင်ထားပေးတဲ့လင့် ကနေ မုန့်လက်ဆောင်းလုပ်နည်းလေးရပါတယ်။ ကျေးဇူးပါနော်။ တခုသိချင်တာက အဲဒီနည်းထဲမှာပါတဲ့ ဆူးမွှေး ရွက်ဆိုတာကိုအဂ်လိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတာ အစ်မသိရင်ပြောပြပေးပါနော်။
on July 23, 2011 at 4:11 pm | Reply Cherie Kate
ဆွမ်းမွေးရွက်ကို Pandan Leave လို့ခေါ်ပါတယ်
on April 12, 2011 at 6:48 pm | Reply Cherry
တရုတ်မဆလာကို Chinese five Spices လို့လဲခေါ်ပါတယ်။
on June 14, 2011 at 3:12 am | Reply chowutyee
on April 15, 2011 at 6:17 pm | Reply pyae sone
on May 30, 2011 at 6:55 am | Reply chowutyee
on April 21, 2011 at 2:00 pm | Reply nayzar
thanks alot yr share cook recipe…i will try to cook..verynice.
on April 27, 2011 at 2:04 pm | Reply chowutyee
on June 12, 2011 at 12:08 pm | Reply kyaw soe win
ပဲမှုန့်အစိမ်းမှုန့် နဲ့အကျက်မှုန့်ကိုကော ဘယ်လိုခေါ်သလဲသိပရစေ အမ။
on July 6, 2011 at 11:25 pm | Reply thiri
gram flour ဆိုတာပဲမှုန့်အစိမ်းမှုန့်ပါ။ gram flour ကိုလှော်လိုက်ရင်အကျက်မှုန့်ဖြစ်သွားပါတယ်။
on June 28, 2011 at 1:45 pm | Reply Gar Field
ကျေးဇူးပဲ ၀တ်ရည် ရေ့
on June 28, 2011 at 1:48 pm | Reply Gar Field
မြန်မာမှာက အမြဲတန်း ပလော့ထားလို့ လာလည်သူတွေနည်းနေတာပါ နို့ ဆိုရင် အများကြီးပဲ အားပေးတယ်
on September 5, 2011 at 7:48 am | Reply chowutyee
on August 17, 2011 at 3:11 am | Reply Hellen Nyein
Baking Soda နဲ့ ဆားဆိုဒါနဲ့အတူတူဘဲလားသိချင်ပါတယ်…
on September 5, 2011 at 7:52 am | Reply chowutyee
Baking Soda က ပါမုန့်တို့၊ ကိတ်မုန့်တို့ ဖုတ်တဲ့နေရာမှာ သုံးတာပါ။ ဆားဆိုဒါကတော့ ပဲပြုတ်တို့ ဘာတို့မှာ သုံးတာပါ။ မတူဘူးပေါ့..
on September 6, 2011 at 5:03 am | Reply nono
on October 5, 2011 at 4:59 am | Reply chowutyee
nono ရေ ကိုရီးယားအနစ်က readymade ဗူးတွေ CityMart မှာ ၀ယ်လို့ရပါတယ်..
on September 17, 2011 at 11:26 am | Reply Zaw Zaw Maung
စားသောက်ဘွယ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခေါ်အဝေါ်လေးတွေလဲ တန်ဘိုးရှိပါတယ်
မြန်မာ ကောင်မလေးများကို လဲထမင်းဟင်း ချက်နည်းတွေ လေ့လာဘို့ တွန်းအားပေးပါဦး
နို့မှုတ်ရင် ထမင်းဟင်း ကောင်းကောင်းမချက်တတ်တဲ့သူတွေ များနေလို့ပါ
on September 19, 2011 at 4:16 am | Reply chowutyee
haaa Thanks.. 😀
on September 28, 2011 at 2:14 pm | Reply William
အကြော်မှုန့်ကို အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုခေါ်တယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးပါဗျာ
on December 26, 2011 at 4:47 pm | Reply vivi3722
အကြော်မှုန့် is not quitea‘specific’ word. i think it might be called flour or starch powder in english. I’m not sure.
on December 30, 2011 at 4:54 pm chowutyee
on October 13, 2011 at 9:54 pm | Reply Aye Thu
on October 14, 2011 at 6:28 pm | Reply chowutyee
Soda ဆိုဒါ လို့ပဲ ခေါ်တယ် ညီမ.. 🙂
on October 17, 2011 at 3:23 pm Aye Thu
Thanksalot sis…:)
on October 17, 2011 at 3:22 pm | Reply Aye Thu
on December 7, 2011 at 4:57 am | Reply Lay Pyay
ကြာဆံဟင်ခါး ထဲ ထည့်တဲ့ ကြွက်နားရွက်မှို (သို့) မှိုတုံတုံ ကို English လိုဘယ်လိုခေါ်လဲအမ
on December 26, 2011 at 4:45 am | Reply moe moe
it’s called wood ear.
on December 24, 2011 at 8:28 pm | Reply moe moe
please let me know ကောက်ညှင်းမှုန် in english. thanks.
on January 17, 2012 at 10:15 am | Reply chowutyee
Sticky Flour = ကောက်ညှင်းမှုန့်
on January 21, 2012 at 6:13 pm moe moe
on January 25, 2012 at 1:01 pm chowutyee
on December 26, 2011 at 4:34 pm | Reply vivi3722
Can anyone in here tell me what ဖက်ဖယ် ရွက် is called in english? Thanks.
on December 30, 2011 at 4:54 pm | Reply chowutyee
ဖက်ရွက် = Wonton Sheet.. 🙂
on December 30, 2011 at 4:44 pm | Reply kira
on December 30, 2011 at 4:49 pm | Reply chowutyee
Ready Made is better… You can buy at City Mart:)
on February 11, 2012 at 6:38 pm | Reply မြတ်
on February 16, 2012 at 2:06 pm | Reply chowutyee
ဟုတ်ကဲ့ မမြတ် တင်ပေးပါ့မယ်… ကျောက်ကျောမှုန့် = Agar Powder.. Thanks 🙂
on February 17, 2012 at 2:57 pm | Reply ပလရာ
ကော်မှုန့် ကို Tapioca လို့ ခေါ်ပါတယ်…
on February 19, 2012 at 3:06 am | Reply zawwin
on February 19, 2012 at 3:08 am | Reply zawwin
on February 20, 2012 at 4:02 am | Reply Minn Minn
အစ်မ ရေ ကျွန်တော့်ကို ကြက်ဥပူတင်း ပြုလုပ်ပုံလေး ပြောပေးလို့ ရမလား ကျွန်တော် လုပ်ကြည့် ရေထွက်နေပြီး ဆိုင်တွေမှာစားသလို မာမာလေး မနေလို့ ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
on February 26, 2012 at 12:52 pm | Reply Little chef
Ear mushroom also call black fungus.
on March 7, 2012 at 3:40 pm | Reply chowutyee
on March 31, 2012 at 2:38 am | Reply Yin Yin
ရွှေကြည် မှုန့် ကိုဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ အ မ…..
sorry sis I don’t know! 😀
on April 10, 2012 at 4:43 am | Reply chowutyee
ရွှေကြည်ကို Semolina လို့လည်းခေါ်တယ် sis…
on April 8, 2012 at 12:38 pm | Reply Kyaw Thu
You have so NICE experiments for International COOKING.I”m very proud of you asaburmese lady. I congratulate to you really.
U U Kyaw Thu
on April 9, 2012 at 4:31 am | Reply chowutyee
Thanksalot U Kyaw Thu!! 😀 I am just house wife who love cooking! 🙂
on April 9, 2012 at 8:42 pm | Reply Hnin Wut Yee
For Yin Yin,In India markets, they call ရွှေကြည် မှုန့် in Sooji(Wheatlets). Thank you so much ,Wut Yee for all your receipes.
on April 10, 2012 at 4:34 am | Reply chowutyee
on May 23, 2012 at 7:07 am | Reply Yin Yin
Thank you so much A Ma Wut Yee..
on May 14, 2012 at 2:08 pm | Reply ဟင်းခတ်မွှေးကြိုင် အခေါ်အဝေါ်များ
[…] ဟင်းခတ်မွှေးကြိုင် အခေါ်အဝေါ်များ […]
on May 23, 2012 at 2:59 am | Reply me me
စမုန်မျိုး၅ပါးမှာ ဘာတွေပါလဲ ပြောပြပေးပါ
on July 17, 2013 at 3:24 pm | Reply Ma Cho
ညီမရေ Worcestershire , Tabasco အဲတာလေးများသိရင် ဖြေပေးပါလား ကျေးဇူးတင်တယ်နော်